U-Tzi the Iceman: Konke Odinga Ukukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
U-Tzi, indoda yeqhwa
Esinye sezifiso esizitholayo maqondana nokuziphendukela kwemvelo komuntu nokongiwa kwaso ukuthi U-Tzi indoda yeqhwa. Imayelana nendoda ebigcinwe kumama futhi owashona ngo-3255 BC. C uneminyaka engama-46 ubudala. Umama utholwe ngenxa yomkhankaso wabagibeli bezintaba baseJalimane ngaphambili e-Ötzal. Kubhekwa njengomama womuntu wemvelo omdala kunabo bonke kulo lonke elaseYurophu futhi sekudume ngoba kunikeza ukubukeka okuningiliziwe ngabantu ababekhona ngeNkathi Yethusi.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, okutholakele kanye nesifiso sika-zitzi the Iceman.
1 Okutholakele ngo-Ötzi the Iceman
2 Ukuhlaziywa kwesayensi
3 U-Tzi indoda yeqhwa nezenzo zakhe zakamuva
Okutholakele ngo-Ötzi the Iceman
Ososayensi bakwazile ukuthola imbangela yokugqunyezwa kwesidumbu. Kuyisimo lapho kubanda kakhulu okwenzeka kulezi ngaphambili ukwazile ukuqhubekisa ukubola kwesidumbu futhi wasigwinya. Ngesikhathi abagibeli bezintaba bethola lesi sidumbu bakholelwa ukuthi yisidumbu sanamuhla. Kujwayelekile kakhulu ukuthola ezinye izidumbu zabanye abagibeli bezintaba ababhajwe ezintabeni ngamakhaza amakhulu. Kodwa-ke, yatholwa yiziphathimandla zase-Austria futhi kwenziwa isifundo ngokuthandana kwayo kweqiniso.
Isidumbu sika-zitzi the Iceman sahlolwa kakhulu, safakwa i-x-ray, salinganiswa futhi sabhalwa ukuthi senziwa yini isikhathi. Kubangela ukuhlaziywa kwezicubu ezinhle kakhulu ezingagcinwa ngokuhamba kwesikhathi. Okuqukethwe izitho nakho kungahlaziywa futhi kuhlolwe ngaphansi kwesibonakhulu. Esidunjini, kutholakala izinsalela zempova ezingutsheni zakhe kusukela ngaleso sikhathi. Ngenxa yophenyo lwesayensi lokulandelana kwezakhi zofuzo kwembulwa ukuthi lokhu Le ndoda ibinamehlo ansundu, iqembu le-O +, ukungabekezelelani kwe-lactose, nezinkinga zenhliziyo.
Izilinganiso ezinikeziwe mayelana nokwakheka komzimba ka-zitzi iceman ukuthi ukuphakama kwakhe kwakucishe kube ngamasentimitha ayi-159 ubude, enesisindo esingamakhilogremu angama-50, wayeneminyaka engama-46 ubudala. Ngenxa yalo lonke ucwaningo nobuchwepheshe besimanje, kwatholakala ukuthi lo muntu ubephethwe yisifo samathambo, izimbotshana, izimuncagazi emathunjini kanye nesifo seLyme. Njengoba ukwazi ukubona, ngenxa yentuthuko yesayensi, imininingwane eminingi ingatholwa esidunjini, yize izobe indala njengalesi.
Imininingwane engaba nayo yempova eyayisezingutsheni zakhe kwakungeyebebeam emnyama. Ikhofi elimnyama yisihlahla esiqhakaza e-Alps kusuka ngoMashi kuya kuJuni futhi sikhombisa lokho UÖtzi u-Iceman washona entwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo.
Ososayensi balungiselela ukuhlaziywa okuningiliziwe okuhlukahlukene ukuze bathole ukwaziswa okuningi ngangokunokwenzeka ngo-Ötzi i-Iceman. Ukuhlaziywa kwezinhlamvu ze-pollen, uthuli nokwakheka kwe-isotopic koqweqwe lwamazinyo kukhombise ukuthi uchithe bonke ubuntwana bakhe edolobhaneni lamanje laseVelturno.
Ekuhlaziyweni kwamathumbu kungakhonjiswa ukuthi kube nokudla okubili kwakamuva. Okunye kwalokhu kudla kwakusondele ku-8 ngaphambi kokufa kwakhe. Esinye sezidlo sasenziwe ngenyama yama-chamois, inyama ebomvu yenyamazane, esivele idliwe kakhulu ngokusanhlamvu okuthile. Lokhu okusanhlamvu kungenzeka i-bran esetshenzisiwe evela einkorn etshaliwe nokuthi impela sasidliwe sisimo sesinkwa. Emathunjini bekubuye kutholakale imbewu ethile ye-blackthorn okungama-plums amancane esihlahla se-blackthorn nezinye izimpande.
Ngempova okutholwe isidlo sokuqala, bekukhonjiswa ukuthi idliwe ehlathini eliphakathi nendawo le-coniferous. Eminye impova ikhombisa ubukhona bukakolweni nemidumba ebingavunwa emasimini asekhaya. Ngokuqhubeka nokuhlaziya inani lempova etholakele, bekungenzeka ukuthi kutholakale izinhlamvu zempova ze-hornbeam. Ibitholakala isesimweni esihle futhi inamaseli angaqinile ngaphakathi. Lokhu kwabonisa ukuthi kwakuyimpova entsha nokuthi yayisanda kukhuleliswa ngesikhathi sokushona kuka-zitzi kuno-Iceman.
Kumele kuqashelwe ukuthi isivuno ngasekupheleni kwehlobo nasezintabeni zasekwindla kumele ngabe sigcinwe kusuka ngonyaka owedlule. Izicubu eziningi zikamama zalimala ngenxa yamazinga okushisa nezinguquko ezidalwa ukuthuthwa komzimba. Lezi zinkinga zenze ukuhlaziywa okuqhubekayo kwaba nzima futhi kwenza kwaba nzima ukuqonda lezi zicubu. Imininingwane eminingi ingakhishwa kuma-mummies inqobo nje uma isimo sabo sokongiwa sihle kakhulu. Ushintsho oluncane kwezinga lokushisa noma lezemvelo lungalulaza izicubu ziye emazingeni aphakeme kangangoba azikwazi ukubonakala.
U-Tzi indoda yeqhwa nezenzo zakhe zakamuva
Ngenxa yokutholakala kwezinto ezazisesidunjini, kwaba lula ukwazi izenzo zokugcina zika-zitzi iceman ngaphambi kokuba afe. Ngokwalokho okubonwayo, le ndoda izamile ukuphilisa okuthile okunjengokusikwa ebinakho esandleni isebenzisa ubulembu. Lokhu kungaqinisekiswa ngezinsalela ezitholakala emzimbeni. Lo muntu kungenzeka ukuthi wayazi ngezinto ezijiyisayo zobulembu obuthize bexhaphozi futhi wakufaka enxebeni. Mhlawumbe, ngemuva kokufaka ukudla esikushilo ngaphambili, ingxenye yalowo moss yafinyelela ohlelweni lokugaya ukudla. Konke lokhu kungaba yizinto ezibalulekile okufanele uzicabangele ngoba bekubaluleke kakhulu ukuthi le ndoda ibe nolwazi olungejwayelekile lwezakhiwo zezitshalo ezizungezile.
Babuye batholakala Ama-tattoos angama-68 esihlakaleni sesobunxele, ama-2 emuva engezansi, ama-5 emlenzeni wesokudla namabili emlenzeni wesobunxele. Bangamaqembu amancane emivimbo ehambisanayo engakha iphethini ebonakalayo. Ukuze kwaziwe ukuthi u-Ötzi indoda eqhwa yayihlushwa isifo samathambo kulezi zindawo, kwakudingeka kusetshenziswe ama-X-ray.Kube nokuqagela okuningi kangangokuthi ama-tattoos ayengaba nomsebenzi wokulapha ngaleso sikhathi. Lolu uhlobo lokutholwa kwesikhumba namuhla.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngo-zitzi the ice man.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » U-Tzi, indoda yeqhwa